बे’होस पारेर महिलालाई मुम्बइ बि’क्री, होस खुल्न लागेपिच्छे आँषधि खुवाइन्थ्यो ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारबे’होस पारेर महिलालाई मुम्बइ बि’क्री, होस खुल्न लागेपिच्छे आँषधि खुवाइन्थ्यो !
बे’होस पारेर महिलालाई मुम्बइ बि’क्री, होस खुल्न लागेपिच्छे आँषधि खुवाइन्थ्यो !
कास्की । पोखरामा काममा लगाइदिने बहानामा महिलालाई बे’होस पारी भारतमा पु-याएर बि’क्री गरेको पाइएको छ। नेपाल प्रहरीको मानव बे’च बि’खन अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार यसरी महिलालाई बि’क्री गरेको आ’रोपमा प्रहरीले नुवा कोटको बालकुमारीका अनिशा भन्ने फूलमाया तामाङलाई प’क्रा उ गरेको छ ।
उनले पोखरामा घरायसी काममा राम्रो कमाइ हुन्छभनी प्रलो’भनमा पारी भारत पु¥याएर बे’चेको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलाले जानकारी दिनुभयो। सुरुमा उनले चाउमिनमा बे’होस हुने औ’षधि मि’साएर बे’होस पारी लगेका र हो’स खुल्न लाग्दा पुनः कोकमा औषधि मि’साएर बे’होस बनाउँदै भारत पु¥याएको पी’डितको बयान छ । उनले पी’डितका दिदीबहिनीलाई नै यसरी पु-याएको पनि खुल्न आएको छ ।
उनीहरुलाई छट्टाछुट्टै को’ठीमा पु¥याएर बि’क्री गरेको ब्यूरोको दाबी छ। भारतको को’ठी सञ्चालकले उनलाई रु तीनलाखमा किनेको भनी यौ-न कार्यमा लगाएका पी’डितको जा’हेरीमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई भारतको मुम्बई, कोलकाता, बिहार लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पु¥याएर वे श्यावृ’त्तिमा लगाएको पाइएको छ ।
एक दिन बजारमा खाजा लिन पठाएको मौ’कापारेर उनी त्यहाँबाट भा’ग्न सफल भएको अवस्थामा भारतीय प्रहरीले सुरक्षितको सहायतामा त्यहाँबाट नेपाली राजदूतावास तथा विश्व सेवा संस्थाको सहयोगमा गत असोजमा नेपाल फर्कन सफल भएको पी’डितको भनाइ छ। पी’डितको जा’हेरीका आधारमा खोजी गर्दा काठमाडौँको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका– १० कपनबाट तामाङ प’क्रा उ परेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी माथि मा’नव बे’च बिख’न तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन २०६४ बमोजिम मु’द्दा अघि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक धमलाले जानकारी दिनुभयो ।